Kungani Inkampani Yakho Kufanele Ikhokhele i-DNS Ephethwe? | Martech Zone
Kungani Inkampani Yakho Kufanele Ikhokhele i-DNS Ephethwe?
NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2020 Douglas Karr
Ngenkathi uphatha ukubhaliswa kwesizinda kumbhalisi wesizinda, akuhlali kuwumqondo omuhle ukuphatha ukuthi i-domain yakho ixazulula kuphi futhi kanjani konke okunye okufakiwe kwe-DNS ukuxazulula i-imeyili yakho, izizinda ezingaphansi, umphathi, njll. Ibhizinisi lakho eliyinhloko lababhalisi besizinda kuyinto ethengiswa kakhulu izizinda, ungaqinisekisi ukuthi isizinda sakho singasombulula ngokushesha, siphathwe kalula, futhi sinezidingo ezakhelwe ngaphakathi.
Kuyini ukuphathwa kwe-DNS?
Ukuphathwa kwe-DNS kungamapulatifomu alawula amaqoqo wesiphakeli se-Domain Name System. Idatha ye-DNS isatshalaliswa kumaseva womzimba amaningi.
Isebenza kanjani i-DNS?
Masinikeze izibonelo zokulungiswa kwesayithi lami.
Umsebenzisi ucela imartech.zone kusiphequluli. Leso sicelo siya kuseva ye-DNS enikezela indlela lapho leso sicelo se-http sigcinwa khona… kuseva yegama. Ngemuva kwalokho igama leseva liyabuzwa futhi umphathi wewebhusayithi yami unikezwa kusetshenziswa irekhodi le-A noma le-CNAME. Ngemuva kwalokho isicelo senziwa kumsingathi wesiza sami bese kunikezwa indlela ebuyiselwe emuva esonjululwe esipheqululini.
Umsebenzisi Ama-imeyili martech.zone kusiphequluli. Leso sicelo siya kuseva ye-DNS enikezela indlela lapho leso sicelo semeyili sigcinwa khona… kuseva yegama. Ngemuva kwalokho igama leseva liyabuzwa futhi umhlinzeki wami wokusingathwa kwe-imeyili unikezwa kusetshenziswa irekhodi le-MX. Ngemuva kwalokho i-imeyili ithunyelwa enkampanini yami yokubamba i-imeyili futhi ihanjiswe kahle ebhokisini lami lokungenayo.
Kunezici ezimbalwa ezibucayi zokuphathwa kwe-DNS ezingenza noma zonakalise inhlangano lezi zinkundla ezikusiza ukuthi uzixazulule:
Speed - Lapho ingqalasizinda yakho ye-DNS ishesha, izicelo zingahanjiswa futhi zixazululwe ngokushesha. Sebenzisa ipulatifomu yokuphatha ye-premium ye-DNS kungasiza ngokuziphatha komsebenzisi nokubonakala kwenjini yokusesha.
Ukuphathwa - Ungaqaphela ukuthi uma uvuselela i-DNS kumbhalisi wesizinda, uzothola impendulo ejwayelekile emuva yokuthi ushintsho lungathatha amahora. Izinguquko zepulatifomu yokuphathwa kwe-DNS cishe zisesikhathini sangempela. Ngenxa yalokhu, unganciphisa noma iyiphi ingozi enhlanganweni yakho ngokuthi ulinde ukuxazulula izilungiselelo ze-DNS ezibuyekeziwe.
komsebenzi - Kuthiwani uma i-DNS yombhalisi wesizinda ehluleka? Yize lokhu kungeyona indawo ejwayelekile, kwenzeke ngokuhlaselwa okuthile kwe-DNS emhlabeni jikelele. Iningi lamapulatifomu wokuphatha i-DNS anamandla we-DNS failover amakhono angagcina imisebenzi yakho ebucayi yemishini isebenza lapho kwenzeka ukuphuma kukagesi.
IClouDNS: Ukusingathwa kwe-DNS okusheshayo, kwamahhala, nokuvikelekile
I-ClouDNS ungumholi kule mboni, uhlinzeka ngokusingathwa kwe-DNS okusheshayo nokuvikelekile. Banikela ngezinsizakalo ze-DNS eziqala nge-akhawunti yamahhala yokubamba i-DNS kuyo yonke indlela ngamaseva wangasese e-DNS wenhlangano yakho:
I-Dynamic DNS - I-Dynamic DNS iyisevisi ye-DNS, enikeza ithuba lokushintsha ikheli le-IP elilodwa noma amarekhodi amaningi e-DNS ngokuzenzakalela lapho ikheli le-IP ledivayisi yakho liguqulwa ngamandla ngumhlinzeki we-inthanethi.
I-DNS yesibili - I-DNS Yesibili inikeza indlela yokusabalalisa ithrafikhi ye-DNS yegama lesizinda kubahlinzeki ababili noma ngaphezulu be-DNS besikhathi sokuphumula esingcono kakhulu kanye nokudilizwa emsebenzini ngendlela elula kakhulu futhi enobungane. Ungaphatha amarekhodi e-DNS egama lesizinda kuphela kumhlinzeki owodwa (we-Primary DNS) kanye nomhlinzeki wesibili osebenzisa ubuchwepheshe be-Secondary DNS angagcinwa usesikhathini futhi avumelaniswe ngokuzenzakalela.
Buyisela emuva i-DNS - Inkonzo ye-Reverse DNS enikezwe yiClouDNS iyinsizakalo ye-Premium DNS yabanikazi benethiwekhi ye-IP futhi ayihlanganisiwe kuhlelo lwamahhala. Ukusingathwa kwe-Reverse DNS kuyisevisi yeklasi lebhizinisi futhi kusekela zombili izindawo ze-IPv4 ne-IPv6 Reverse DNS.
DNSSEC - I-DNSSEC iyisici se-Domain Name System (i-DNS) eqinisekisa izimpendulo kumagama wokubheka amagama wesizinda. Kuvimbela abahlaseli ekukhohliseni noma ekufakeni ubuthi izimpendulo zezicelo ze-DNS. Ubuchwepheshe be-DNS abuklanyelwanga ukuphepha engqondweni. Isibonelo esisodwa sokuhlaselwa kwengqalasizinda ye-DNS yi-DNS spoofing. Uma kunjalo umhlaseli uduna inqolobane yesixazululi se-DNS, okudala ukuthi abasebenzisi abavakashela iwebhusayithi bathole ikheli le-IP elingalungile futhi babuke isayithi elibi lomhlaseli esikhundleni saleyo ababeyihlosile.
I-Failover ye-DNS - Insiza yamahhala ye-DNS Failover evela kuClouDNS egcina amasayithi akho kanye nezinsizakalo zewebhu online uma kwenzeka kuba nohlelo noma ukuphuma kwenethiwekhi. Nge-Failover ye-DNS futhi ungathutha ithrafikhi phakathi kokuxhumeka kwenethiwekhi okungafuneki.
I-DNS ephethwe - I-DNS ephethwe yisevisi ephethwe ngokugcwele yinkampani yobungcweti yokubamba i-DNS. Umhlinzeki we-DNS ophethwe uvumela abasebenzisi ukuphatha ithrafikhi yabo ye-DNS ngokusebenzisa iphaneli yokulawula esekwe kuwebhu.
I-Anycast DNS - I-Anycast DNS ngumqondo olula - ungafinyelela endaweni eyodwa ngokulandela imigwaqo eminingi ehlukene. Esikhundleni sokuba yonke ithrafikhi yehle ngomzila owodwa, i-Anycast DNS isebenzisa izindawo eziningi ezithola imibuzo kunethiwekhi, kepha ezindaweni ezahlukahlukene. Inhloso lapha ukuthi inethiwekhi ithole indlela emfushane yomsebenzisi kwiseva ethile ye-DNS.
I-Enterprise DNS - Inethiwekhi ye-ClouDNS 'Enterprise DNS yakhelwe ukucubungula izigidi zemibuzo ngomzuzwana ngamunye. Imodeli yabo yamanani ayisuselwa ekukhokhisweni kombuzo. Awusoze wakhokhiswa ngeziqongo zakho namagama wesizinda sakho ngeke ayeke ukusebenza, ngenxa yemikhawulo yemibuzo ye-DNS. Ngeke ukhokhiswe nganoma yiluphi uhlobo lwezikhukhula zombuzo we-DNS.
SSL Izitifiketi - Izitifiketi ze-SSL zivikela idatha yomuntu siqu yekhasimende lakho kufaka phakathi amaphasiwedi, amakhadi esikweletu, kanye nemininingwane kamazisi. Ukuthola isitifiketi se-SSL kuyindlela elula yokwandisa ukuzethemba kwekhasimende lakho kubhizinisi lakho eliku-inthanethi.
Izinsizakalo ze-DNS ezizimele - Amaseva we-DNS azimele amaseva amhlophe anelebula elimhlophe ngokuphelele. Uma uthola i-Private DNS server, izoxhunyaniswa nenethiwekhi yabo kanye ne-interface yewebhu. Iseva izophathwa futhi isekelwe abaphathi bohlelo lwayo futhi uzokwazi ukuphatha zonke izizinda zakho nge-ClouDNS interface yewebhu.
I-ClouDNS ungumhlinzeki ophethwe i-DNS kusukela ngo-2010. Inhloso yabo ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili ze-DNS emhlabeni. Bahlala njalo bethuthukisa futhi benweba inethiwekhi yabo ukudlula amazinga embonini futhi balethele amakhasimende i-ROI ephezulu kakhulu. Ingqalasizinda yabo ye-Anycast DNS ifaka izikhungo ezingama-29 ezahlukahlukene zedatha ezitholakala emazweni we-19 kumazwekazi ayisithupha.
Azikho izikhathi eziningi kakhulu ukuthi nobabili ungonga imali futhi wandise ukungafuneki, isivinini nokwethembeka kwezakhiwo zakho eziku-inthanethi - kepha yilokho kanye esikwenzile. Vele wenze usesho lwe- Ukuphela kwe-DNS futhi ubone ukuthi zingaki izinkampani eziye zaba nezinkinga ngokuthembeka kwazo kwe-DNS.
Bhalisela i-Akhawunti yamahhala ye-ClouDNS
Qaphela: Isixhumanisi esinikezwe kule ndatshana siyisixhumanisi esihambisanayo.
Tags: irekhodiamafucname irekhodidnsukuphathwa kwegama lesizindaigama lesizinda serverisivinini segama lesizinda segamaukulungiswa kwesizindaisivinini sesizindadns ephethwemx irekhodiigama lesevaisivinini sesizaijubane
I-StitcherAds: Ukuphathwa Kwezikhangiso Zomphakathi, Ukuhlolwa, Ukukhuliswa, Nokwenza Okwakho
Umthelela Wobude Bokuqukethwe Kuzinga Lenjini Yokucinga nokuguqulwa